Hawlahayga Google: Sida loo kiciyo habka mugdiga ah | Androidsis
Hawlahayga Google: Sida loo kiciyo habka mugdiga ah
Mawduuca mugdiga ah wuxuu bilaabay inuu ka muuqdo nooca tobnaad ee Android, laakiin waqtigii laga soo gudbay codsiyo badan oo caan ah ayaa hirgaliyay muuqaalkan. Qaabkan waxa aad rabto waa laba shay oo aasaasi ah: Mid waa inuu dhaawici aragga sida ugu yar ee suurtogalka ah, kan kalena waa badbaadin wax ku ool ah bateriga.
Ka dib markii la gaadhay adeegyo badan oo Google ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ayaa ah "Waxqabadkayga Google", oo ah bogga koowaad ee shirkadda Mountain View ay hesho. Boggan waxaan kula tashan karnaa wax kasta oo aan qabanno maalin kasta mashiinka wax raadinta, haddii ay raadineyso macluumaad, adeegsiga YouTube, iyo waxyaabo kale.
Haddii aad inta badan ku dhex baarto kombiyuutar iyo taleefan gacmeed, waxay sidoo kale ku tusaysaa aaladda aad ka sameysay weydiinta, websaydhka aad booqanayso iyo waxyaabo kale oo badan. Waa taariikhda wax kasta oo aan qabanno maalin kasta, waxa ugu muhiimsani waa in tan loo ilaaliyo hab nabdoon, oo ay ku jirto marwalba in boostada la xidho.
Sida looga hawlgeliyo habka mugdiga ah Hawlahayga Google
Ku shaqeysiinaya hab mugdi ah Hawlahayga Google Waxaa lagu samayn karaa qalab kasta oo Android ah, tan awgeed waa inaad ka soo gasho tusaale ahaan Google Chrome. Laga soo bilaabo caddaanka aan caadiga ahayn wuxuu noqdaa midab madow oo leh muraayad, qoraalka wuxuu noqonayaa midab cad oo looga soocayo asalka.
Si aad ugudhaqaajiso habka mugdiga ah Google My Activity waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Waxa ugu horeeya waa inaad furto biraawsarka aad adeegsan karto, ama Google Chrome, Firefox ama wixii kale
Helitaanka myactivity.google.com inaad ogaato dhammaan howlahaaga mashiinka raadinta, ha ahaato goob gaar ah, isticmaalka YouTube, iyo waxyaabo kale
Hadda qalabkaaga ku dhaqaaji «Xaaladda Madoow», badanaa waxay ku timaaddaa qaybta hoos loo dhigo ee ikhtiyaarrada taleefanka, dhaqaajiso «Mugdiga Habka» oo hadda mar aad ku xirato «Hawlahayga Google» waxaa lagu soo bandhigi doonaa madow isku dhafan oo cawl
Habka mugdiga ahi wuxuu bilaabmayaa inuu ku soo baxo bogagga kale ee shirkaddaIn kasta oo ay ku sameyso qaab gudaha xilligan iyo inbadan ayaa laga ogaan doonaa iyaga bilaha soo socda. Mawduuca mugdiga ah ee Android 10 waxaa lagu dhaqaajiyaa hab ahaan "Shaashad" ama "Shaashad iyo dhalaal" ka dibna ikhtiyaarka waxaa lagama maarmaan ah in loo kiciyo isbeddelka lagu dabaqayo
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Hawlahayga Google: Sida loo kiciyo habka mugdiga ah
Tani waa sida OnePlus 9 Pro uu ugu muuqdo sawirro dhab ah: qaabeyntiisa iyo kaamirooyinka ay adeegsan doonto waa la sifeeyey [+ Video]
Sida loo beddelo midabka kiiboodhka WhatsApp